Levamisole iombonana amin'ny bolus 3400mg - China Chongqing Fangtong
iombonana amin'ny Levamisole bolus 3400mg
Fifehezan tsirairay ahitana Levamisole bolus levitra 2000mg sy Oxyclozanide 1400mg. DESCRIPTION LEVAOXYNIDE dia miloko mavokely takelaka ho an'ny dosing am-bava. LEVAOXYNIDE hita dia malalaka anthelmintic karazany ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny ny gastro-tsinay sy ny havokavoko nematode. Aretina sy ny mitaiza fascioliasis dia omby aman'ondry. -Lungworms: Dictyocaulus spp. -Gastro-tsinay kankana: Haemonchus spp., Ostertagia spp. (Afa-tsy OMpiara-Ostertagia olitra, dia omby aman'ondry), Nematodirus spp., Tricho ...
LEVAOXYNIDE dia miloko mavokely takelaka ho an'ny dosing am-bava.
LEVAOXYNIDE dia malalaka anthelmintic karazany ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny ny gastro-tsinay sy ny havokavoko nematode. Aretina sy ny mitaiza fascioliasis dia omby aman'ondry.??
-Gastro-tsinay kankana: Haemonchus spp., Ostertagia spp. (afa-tsy OMpiara-Ostertagia olitra, dia omby aman'ondry), Nematodirus spp., Trichostron - gylus spp., cooperia spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp.
LEVAOXYNIDE matotra indrindra ihany koa ny mamindra Fasciola spp., (Flukes) ankehitriny ao amin'ny bile duct ny aty.
Oxyclozanide dia anthelmintic ny salicylanilide vondrona. Tsy mahomby an'i Fasciola karazany, manao toy ny uncoupler ny oxidative phosphorylation. Mety hanao zavatra mihoatra ny iray toerana mba mihena ambaratonga ny ATP mitarika ho metabolic hiasa araka ny tokony sy ny fahafatesan 'ny katsentsitra.
Levamisole dia tena variana sy tampon'isan'ny haingana concentrations ranon-dra dia nahatratra amin'ny eo ho eo ny 1 to3 ora taorian'ny dosing am-bava. Levamisole haingana dia haingana zaraina amin'ny sela rehetra, izay misy imbetsaka ambaratonga avo noho ny haavon'ny mifanaraka ranon-dra. Fanafoanana avy amin'ny ranon-dra sy ny sela tena haingana ihany koa, ny tena lalana ho famongorana ny fisotrony sy ny bile.
Oxyclozanide dia variana tsikelikely taorian'ny fitantanana am-bava amin'ny ranon-dra tampon'isan'ny tahan'ny 24 ora aorian'ny dosing. Excretion dia ankamaroan'ny faecal, biliary excretion maha-manan-danja indrindra lalana ny famongorana.
Levitra SY ADMINISTRATION
1 bolus 250-300kg vatana isaky ny lanjany.
dia mety hahatonga ny aretim-pivalanana indraindray, inappetence, frothing, salivation sy ny taovam-pisefoana fahoriana.
- Fa fitsaboana biby ihany
- Aoka amin'ny takatry ny ankizy.
-3 andro for ronono.
-28 andro ho an'ny hanina.
Store ao amin'ny mangatsiatsiaka, maina sy toerana maizina eto ambany 30 ℃.
5 Boli × 12 ravin / Box.
Next: Multivitamins iombonana amin'ny takela-bato